Alahady Faharoa Paka : Alahadin'ny Famindram-pon'Andriamanitra - Fihirana Katolika Malagasy
Alahady Faharoa Paka : Alahadin'ny Famindram-pon'Andriamanitra
Daty : 29/03/2008
Jesoa o! Matoky Anao izahay
Natokana ho alahadin'ny Famindram-pon'Andriamanitra ity alahady ity, indrindra indrindra noho ny fiangavian'i Jesoa manokana tamin'i Mb Faustina Kowalska , nankatoavin'ny Papa Joany Paoly II, maty ny asabotsy mialoha ny fetin'ny Famindrampon'Andriamanitra (2 aprily 2005).
Amin'ny Litorjia ankalazaintsika androany koa, dia mitantara ny momba ny Fahefana hamela heloka ( Konfesy) nomen'i Jesoa ny Apostoly (Jn 20, 19-31 ).
Mba hahazoana misimisy kokoa ny efapolo andro ankalazana ny Paka dia tsara ny mampahatsiahy amin'ny ankapobeny ny vanim-potoana Mystagogique, fivoasana ny mistery, izay nifandovan'ny Fiangonana hatrany am-piandohana.
Izany no hahafahantsika migoka ny hafalian'ny Paka, santarintsika amin'ny famelan-keloka, sy amin'ireo sakramenta rehetra mamelona sy mandavorary ny Fiangonana.
Dia iza no mino? Ahoana no hahatsapantsika fa tena mpino isika? Sa dia atao valy boraingina fotsiny hoe rehefa mino ianao dia tsara, tsy mino ianao, raharahanao izany... ()
Anisan’ny fanehoana izany finoana izany ny Sakramenta (), izay hifampizarako aminao etoana. Aorian’ny Paka manko no fotoana nandalinan’ny kristianina ny tena maha-kristianina azy, indrindra raha zohiana ny lovam-panahy nifandovana tamin’ny taonjato maro nifandimby, hatrany am-pihandohana. Nandritra ny karemy manko, ireo nantsoina hoe katekomena () dia niomana ho amin’ny fandraisana ny batemy.
Tsy hoe ny efapolo andron’ny karemy ihany anefa no fiomanana fa efa nialohavana fotoana elaela nizahana toetra ireo nangataka hiroso ho amin’ny batemy. Raha tsy hita ny fahatapahan-kevitra hiaina ny fitsipi-piainana maha-kristianina, tsy miroso amin’ny sakramenta. Dia izay ilay hoe : “Miara-maty amin’i Kristy, ny amin’ny fahotana”.
Ireo alahady 7 amin’ny Paka, araka izany dia nandinihana ny sakramenta fito (), loharanom-pahasoavana ho an’ny mpino.
Ny alahady voalohany dia niainana sy nanavaozana ny tokin’ny batemy.
Ny alahady faharoa, alahadin’ny famindrapon’Andriamanitra, hiderana ilay famindram-po tsy misy fetra : “Raiso ny Fanahy Masina, ny fahotana izay avelanareo dia ho voavela…” (Jn 20,19-31).
Ny alahady fahatelo dia ankalazana ny “mofo novakiana” : “teo am-pamakiana ny Mofo no nahalalan’ireo mpianatra an’i Jesoa” (Lk, 24, 13-35). Amin’ny taona A dia vakiana ny tantaran’ireo mpianatra roalahy nankany Emaosy (Lk 24, 13-35) amin’ny taona B dia tohizana ny famakiana io evanjely io (Lk, 24, 35-48), ary navohitran’i Lioka ihany ny tapaka hazandrano nohanin’i Jesoa tafatsangan-ko velona… amin’ny taona D kosa dia ny evanjely araka ny nosoratan’i Joany no vakiana, ny fanaratoana : trondro manambara an’i Kristy, ilay zanak’Andriamanitra, mpamonjy antsika (Jn 21, 1-19) kanefa mbola mivohitra ihany ny famakiana ny mofo sy ny hazandrano….
Ny alahady faha-efatra, alahadin’ny Mpiandry Ondry tsara, dia vakiana ny Evanjely araka an’i Joany (Jn 10, 1-30) : i Jesoa ilay vavahadin’ny ondry (taona A : Jn 10, 1-10), mahafohy ny ainy ho an’ny ondriny (taona B : Jn 10, 11-18) ary manome ny fiainana mandrakizay izay manaraka Azy (Taona D : Jn 10, 27-30). Izany no antony hivavahana manokana ho an’ny mpitondra fiangonana sy ho an’ny fiantsoan’Andriamanitra ho Pretra sy ho relijiozy amin'io alahady io.
Ny alahady faha-dimy dia manisy tsindrim-peo amin’ny didim-pitiavana tokony hihainan’ny Kristianina : ny fifidianana ireo fito lahy hanompo sy hitantana ny fizarana ny fiantrana (Asa 7, 1-7 : vakiteny I taona A), araka ny didin’i Kristy dia ny hinoantsika Azy sy ny hifankatiavantsika (1Jn 3, 18-24 : Vakiteny II taona B / Jn 13, 31-33° : Evanjely Taona D), mba tsy hisy intsony ny alahelo amam-pitarainana (Apok 21, 1-5 : vakiteny II taona D). Amin’ny alahady fahadimy dia tsy milaza mazava momba ny sakramenta, fa mamporisika kosa hitsinjo ny mahantra sy ny osa, ary mazava loatra fa anisan’ireny ny marary. Ny sakramentan’ny marary manko tsy hoe hahazoan’ny marary fahasitranana am-panahy sy ara-batana ihany fa porofom-pitiavana asehon’ny fiangonana ho an’ny zanany osa.
Ny alahady faha enina dia ny fampanantenana ny mpanafaka alahelo. Hangataka amin’ny Raiko aho, ka homeny Mpanafaka alahelo hafa ianareo (Jn 14, 15-21 : Taona A), dia nidina tamin’ny Jentily ny Fanahy Masina (Asa 10, 25-48 :vakiteny voalohany Taona B), ilay Fanahy hampahatsiaro izay rehetra nolazain’i Kristy (Jn 14, 23-29 : taona D).
Ny alahady faha-fito kosa, ialohavan’ny Fiakarana any an-danitra ‘Ascension’ amin’ny faritra sasany, alahadin’ny fiakarana ho an’ny sasany, dia mamintina ny vavaka nataon’i Kristy ho an’ny fiangonana : mba ho iray ihany izy rehetra. (Jn 17, 1-11a [taona A]; 11b-19 [taona B]; 20-26 [taona D], mampahatsiaro ilay sakramenta manambara ny misterin’i Kristy sy ny Fiangonana, ny misterin’ny Fitiavana.
Raha manaraka ireo tsipihevitra lazaiko ireo ianao dia hahatsapa fa ny fandinihana manokana ny sakramenta tsirairay dia manambara ny fifandraisana misy amin’izy ireo tsirairay avy. Ny zava-dehibe dia ny fiverenantsika matetika amin’ny fandinihana ny hasarobidin’ny fiantsoana niantsoana antsika.
Ny tanjon’ny fotoana mystagogique dia ny hanavaozantsika ny finoana an’i Kristy nitsangan-ko velona. Ny sakramenta rehetra dia manambara ny misterin’ny Paka, ary manova ny fiainantsika rehefa ekentsika ny hiara-maty amin’i Kristy ny amin’ny fahotana, mba hitsanganantsika miaraka aminy.
Dia samia mandinika ny fiainany hoe tamin’ny inona no niarahako maty tamin’i Kristy... ho ahy manokana manko, mbola manana matoatoa  mandehandeha ao am-poko aho ka mazava loatra ireo no manakana ahy tsy hihaina tanteraka ny misterin’ny Paka.
Dia sahy hilaza ve aho hoe : mino?
Mino aho Tompo fa mba vonjeo re ity tsy finoako... (Mk 9, 23-24)
 Jereo ny fanontaniana farany amin’ity fifampizarana ity
 Ny famaritana ny sakramenta dia Famantarana hita maso na tsapain’ny tanana na renesin’ny sofina, manambara sy mampahazo ny Fahasoavana
 avy amin’ny grika hoe κατηχοὐμενος izay midika : mampianatra amin’ny feo avo, tsy azo afangaro amin’ny katesizy izay midika akon’ny fampianarana amin’ny fiainana
 Tsy hiady hevitra momba ny isan’ny sakramenta aho, satria manko ho an’ny Mpino an’i Kristy sasany, tsy misy afa-tsy sakramenta roa na telo... ho an’ny fiangonana katolika dia notanana ho fito ny isan’ny sakramenta
 ankoatry ny fankalazana ny sakramentan’ny Batemy, ny litorjian’ny Jiro sy ny Rano dia manavao ny toky nomena tamin’ny batemy ny Kristianina
 Vakio ny Taratasin’i Paoly ho an’ny Efesiana (Ef 5, 21-33) milaza momba ny Fifankatiavan’ny lahy sy ny vavy.
 ireo fahotana sy ireo zavatra nolaviko mba hanarahako ny Tompo, nefa avy eo toa mahafinaritra ahy indray ny miverina aminy avy eo... toa tsy foiko hofongorana tanteraka
< Alahady faha-3 Fankalazana ny Paka
Zoma Masina >
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0234 s.] - Hanohana anay